Tanzania setịpụrụ maka nzukọ UNWTO maka Afrịka n'afọ na -abịa
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Tanzania » Tanzania setịpụrụ maka nzukọ UNWTO maka Afrịka n'afọ na -abịa
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • nzukọ • News • Akụkọ na -agbasa na Tanzania • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ dị iche iche
Dr. Ndumbaro nke Tanzania na UNWTO Pololishkavili
A na -atụ anya na Tanzania ga -akwado Kọmitii Mba Ndị Dị n'Otu Maka njem nlegharị anya nke ụwa (UNWTO) maka Afrịka n'ọnwa Ọktoba n'afọ ọzọ.
UNWTO kwadoro Tanzania ka ọ bụrụ onye ndoro ndoro na onye ọbịa nke 65th UNWTO Commission for Africa 2022 nzukọ mgbe mba Afrịka a gosipụtara njikere ya ịnabata nnọkọ njem nlegharị anya dị elu.
A na -atụ anya na nzukọ a ga -eme na Arusha, obodo ndị njem nlegharị anya na ugwu Tanzania.
Ndị sonyere ga -enwe ohere ileta isi ogige ntụrụndụ anụ ọhịa na ugwu Kilimanjaro, ewezuga ọtụtụ saịtị ihe nketa mpaghara na mpaghara ahụ.
UNWTO kwadoro Tanzania ka ọ nabata nzukọ a n'oge nzukọ minista emere na Namibia na Cape Verde na June na mbido afọ a nke ndị minista na -ahụ maka njem nlegharị anya nke Afrịka zukọrọ ka ha kpaa maka njem nlegharị anya nke kọntinent ahụ na itinye ego.
Onye odeakwụkwọ UNWTO bụ Maazị Zurab Pololikashvili anabatala arịrịọ a site na Tanzania onye ọbịa nzukọ n'oge nnọkọ Brand Africa nke UNWTO haziri na Windhoek (Namibia) na June afọ a.
Nzukọ Brand Africa adọtala ndị minista na-ahụ maka njem nlegharị anya 15 sitere na kọntinent a bụ ndị kwetara ka ha rụkọọ ọrụ ọnụ iji chọta usoro ga-eme ka ụlọ ọrụ njem nlegharị anya nke kọntinent ahụ ugbu a na-efe efe nke ọrịa Coronavirus (COVID-19).
Ndị ozi a kwere nkwa na ha ga -arụkọ ọrụ wee mepụta akụkọ ọhụrụ maka ikpo okwu mmepe njem na mpaghara Afrịka niile.
Mkpebi ka na -akwado Tanzania onye a na -achọ ịnabata nzukọ UNWTO nke 65 maka nzukọ Afrịka n'afọ na -abịa bụ nke emere na 64th UNWTO Commission for Africa Meeting nke emere na Sal Island nke Cape Verde n'izu gara aga.
"Anyị ekwuola gbasara nzukọ nke iri isii na ise nke World Tourism Organisation (UNWTO) nke a ga -enwe na Tanzania nke ga -etinye mba a na maapụ njem," onye minista na -ahụ maka njem na Tanzania bụ Dr. Damas Ndumbaro ka o kwuru.
A na -atụ anya na nzukọ a ga -eme n'afọ na -abịa ga -adọta ndị minista njem njem iri anọ na ise sitere na steeti Afrịka niile.
Onye ozi ahụ duru ndị nnọchi anya Tanzania gaa nzukọ nke ahọpụtara mba Africa a ka ọ bụrụ onye otu UNWTO Programme na Kọmitii Mmefu Ego (PBC).
Mba ndị otu UNWTO nke Afrịka ga -arụkọ ọrụ ọnụ iji guzobe akụkọ ọhụrụ maka njem njem n'ofe kọntinent ahụ.
Iji ghọta nke ọma ikike ndị njem nwere iji kwalite mgbake, UNWTO na ndị otu ya ga-arụkọ ọrụ na African Union na ụlọ ọrụ nkeonwe iji kwalite kọntinent ahụ na ndị na-ege ntị zuru ụwa ọnụ site na akụkọ dị mma, ndị mmadụ hiwere isi na akara dị irè.
Site n'ịghọta njem nlegharị anya dị ka ogidi dị mkpa nke mmepe na-adigide na mkpokọta maka kọntinent ahụ, UNWTO anabatala ndị nnọchite anya ọkwa dị elu na ọgbakọ mpaghara mbụ maka iwusi Brand Africa ike nke emere na Namibia.
Ogbako a gosiputara ntinye aka nke ndị ndu ndọrọndọrọ ọchịchị nke mba Namibia, tinyere ndị isi ọha na nkeonwe sitere n'ofe kọntinent ahụ.
Onye odeakwụkwọ UNWTO Zurab Pololikashvili nabatara mkpebi siri ike ịtụgharị uche yana ịmalitegharị njem.
“Ebe ndị Africa ga -ebute ụzọ na mmemme na ịkwalite ọdịbendị nke kọntinent ahụ, ike ntorobịa na mmụọ onye ọchụnta ego na nnukwu nri afọ ya,” ka o kwuru.